टेकु अस्पतालमा राखिएका कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था कस्ताे छ ? - Dainik Online Dainik Online
टेकु अस्पतालमा राखिएका कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था कस्ताे छ ?
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार १२ : ५०
काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि उपचार गर्ने टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल बिहीबार सुनसान देखियो । अस्पतालको प्राङ्गणमा केही स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको नाम दर्ता तथा कुन रोग लिएर आएका हुन् भन्ने जानकारी लिन बसेका थिए ।
हाल सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून भएकाले पनि सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र उपचार राम्रो गरिएको छ । यदि महामारीको रूपमा कोरोना भित्रियो भने उपचारमा समस्या हुनसक्छ । आइसोलेसन वार्डमा अन्य व्यक्तिलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । रोग अन्य व्यक्तिमा सर्न नपाओस् भनेर यस्तो प्रतिबन्ध गरिएको निर्देशक डा. राजभण्डारीले बताउनुभयो । तर दुःखको विषय सङ्क्रमितको स्वाब परीक्षण चारपटक गर्दा पनि कोरोना रिपोर्ट अझै पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभ रिपोर्ट देखुन्जेलसम्म बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न पाइँदैन । रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए पनि चिकित्सकहरूको निगरानीमा राखेर घरमा पनि छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ । चीनमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको दुई हप्तापछि पुनः परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएकाले पुनः कोरोना देखिन सक्छ भनेर उनीहरू छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ ।